Immisa qof oo reer Dutch ah ayaa wali bixin kara biilashooda inta lagu gudajiro qalalaasaha Corona? : Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 21 May 2020	• 14 Comments
Haddii aad raacdid warbaahinta, Netherlands dhib weyn kama haysato marka laga reebo feyraska corona, oo wali u eg sida bambeel waqti qarxa. Aaway saxaafadu markay tahay muujinta dhibaatada shaqsiyadeed ee ka dambeysa albaabada hore dad badan? Taasi ma ahan wax adag in la falanqeeyo tirooyinka RIVM iyo in la muujiyo labada dhinac. Warbaahinta guud ayaa difaacaysa siyaasada Rutte & Co. iyo Jensen oo yidhi ma xuma. Waxaa jadwalka mudada dheer ayaa ah inay jiri doonaan soo nooleyn kale oo markaas kadib la dhammayn doono booliiskii gobolka oo wax walba iyo qof kasta oo dhaleeceeya la caddeyn doono. Laakiin muxuu qofna u fiirinaynin culeyska shaqsiyeed iyo dhaqaale?
Ficil ahaan, dhammaan xirmooyinkaas ballan-qaad ee taageero ee loo ballan-qaaday waxay badiyaa su'aal ku noqon doonaan xisaab-xisaabeedka, halkaasoo laguu soo diri doono bilaawga A ilaa counter B. Gaar ahaan, the 433.000 oo iskood u shaqeystayaal ah waxay noqon doontaa lafdhabarta, maxaa yeelay taageeradooda TOZO ee 1da Juun waxaa lagu tijaabin doonaa dakhliga ka soo gala lammaanaha ka dibna waa dhammaaday oo wuu dhammaaday. Xitaa haddii aad taageero hesho, dad badan (oo ay ku jiraan kuwa aan iskood u shaqeysan) ayaa laga yaabaa inay ogaadaan in hoos u dhac dakhligu uu ku noqon karo musiibo bixinta kirada. Dawladdu waxay u aragtaa in dhibaatadan ay soo ifbaxday, sidaa darteed qorshuhu wuxuu ahaa in lagu dejiyo meel ku-meel-gaadh ah oo kiro ah, laakiin taasi waa ay dhacday Kajsa Ollongren torpedoed.
Sidan ayaa ay ku dhex galeysaa siyaasada: khadka cas ayaa muddo dheer la aasaasay, laakiin waxaad sameyneysaa xoogaa ficil ah oo ku saabsan 'annaga ayaa u taagan' ama 'waanu kasoo horjeednaa'. Taasi waa khayaamada dimuqraadiyadda ee aan ku nool nahay. Ollongron wuxuu leeyahay joojinta kirada ayaa kaliya loogu talagalay shirkadaha guryaha, sababtoo ah waxay haystaan ​​lacag ka yar oo ay ku maalgashadaan dhismaha cusub. Golaha wasiirradu wuxuu doorbidayaa inuu siiyo milkiileyaasha fursad ay ku bixiyaan xalal caadiya. Tusaale ahaan, waxay siin karaan kiraystayaasha daahfurka lacag bixinta, waxay burin karaan qayb ka mid ah kirada kadib ama way dhimi karaan kirada, ayay tidhi Kasja. Ollongren sidoo kale wuxuu doonayaa inuu fududeeyo in si ku meel gaadh ah loo dhimo kirada. Biil cusub oo dhaqangal noqon doona goor dambe ayaa waliba tan suuragal ka dhigaya.
Sharci kale. Shuruucdu waxay ka duulayaan dhegaheenna, laakiin dhab ahaan waxay ku sii jiri doonaan shirkadaha guryaha inay yareeyaan kirada. Oo waxay u badan tahay inay si xamaasad leh u fuliyaan (ma aha).
Dabcan, dhibaatooyinka dhabta ahi waxay la jiraan dadka aan awoodi karin mar dambe oo laga yaabo inay hal ama laba bilood ka dambeeyaan. Annagu garan mayno sababta oo ah cidina ma baadheyso. Waxaad dooneysaa inaad dhibaatada ku haysa bulshada dhexdeeda rooga dowlad ahaan. Hoos u dhigista kirada waa wax fiican, laakiin maxaad ku sameyneysaa wakaaladaha wax uruurinta ee aan la xakamayn karin iyo qolada amaahda dadka ka qaada oo xisaabaadyo aad u badan dul dhigaya akoonnada waqtigii la dhaafay? Kirada bilaha ah ee ijaarka ah ayaa si dhakhso leh kugu horseedi kara boqolaal yuro oo qarash dheeri ah, taas oo kaa dhigaysa inaad xitaa ka sii dambeyso bisha xigta.
Kadib waxaa jira jawaab celin silsilad ah oo ku saabsan dhibaatooyinka, halkaasoo aad dhaqaale ahaan ku xayiran tahay, taasina waxay xitaa u horseedi kartaa daryeelka dhallinyarada sidoo kale way imaan karaan oo waxay fiiriyaan haddii carruurtaada aan si wanaagsan lagu dhex dejin karin qoys foster ah, maxaa yeelay adigu hadda ma sii jirtid. daryeelo.
Haddii hoos u dhaca lacagta (iyadoo ay ugu wacan tahay balaayiin euro) ay saameyn ku yeelanayso sicirka suuqyada waaweyn iyo haddii canshuuraha muddada dheer ay kordhaan, sababtoo ah xirmooyinka gargaarka ayaa ah in meel looga soo qaado, xitaa dad badan ayaa dhibaato la geli doona.
Dabcan sidoo kale waxaa jira dad si fiican wax u qabanaya. Kuwani waa dadka u shaqeeya nidaamka isla markaana fuliya dhammaan howlaha korjoogteynta iyo fulinta. Waxaad sida badan heli kartaa shaqo weyn oo ah kormeere RIVM, halkaas oo laguu diro waddada si aad dadka ugu tijaabiso corona ama aad aragto haddii dadku ku dhegaan mitirka iyo badhka. Waxaa laga yaabaa inay jiraan shirkado lataliyeyaal ah oo la soo dersay heyday, sababtoo ah waxay hagaan shirkadaha waxayna kaala taliyaan sida ay ugu abaabulaan shirkadooda bulshada hal mitir iyo badhka ah. Markii dad badan oo u shaqeeya dowladda, dowladda hoose ama shirkado bixiya adeegyo la xiriira, dad badan ayaa ka faa'iideysan doona xakameynta iyo ciqaabta kooxda aan weli u shaqeyn nidaamka.
Mudo intee leeg ayaa Nederland laga ogaan doonaa halkaas qofna Waxay u timid inay badbaadiso? Mudo intee leeg ayay dadka u shaqeeya nidaamka u muuqdaan is-iimaan toos ah muraayadda ayagoon la kulmin wax ceeb ah? Hagaag, inta aad ka tirsan tahay aqlabiyadda, waad ku guuleysan kartaa deynta wadajirka ah ee aad la leedahay Meiland halkii aad ugu diri lahayd waddan runtii xor ah. Goorma ayay dadku ogaan doonaan inaan ku nool nahay dimoqraadiyad xishood ah, oo ay siyaasiyiintu sannado badan soo bandhigayeen fikirka khaldan ee doorashada, laakiin si qarsoodi ah ay u raacaan ajande weyn oo qasab ku ah shacabka? Sida kaliya ee looga bixi karo xaaladdan ayaa ah kacdoon dhab ah, oo ay dadku awoodda ku qaataan.
Tan waxaa lagu samayn karaa dimoqraadiyad toos ah. Dimuqraadiyadda tooska ah, wasiirrada si toos ah loo soo xushay dadku waxay u gudbiyaan dadka. Waxay ku go'aamiyaan aqlabiyad in sharciyada la meel mariyo, sharciga ugu weyn ee jira ayaa ah in sharci uusan qasbin ama baabi'in karin xuquuqda aasaasiga ah ee dastuuriga ah. Sidaa darteed, wax kasta oo ku xadgudba asturnaanta iyo jirkaba iyo xubnahoodaba sharci uma noqon karaan sharci (xitaa xitaa sharci ku saabsan tallaalka qasabka ah). Dimuqraadiyadda tooska ah waxaa dadku ku rakibi karaa iyaga oo iska dhega tiraya siyaasadaha hor-istaaga iyo dhisidda nidaam cusub laftooda. Boqolaal kun waa inay muujiyaan inay rabaan tan. Taasi waa sababta aan runtii ugu baahan nahay inaan mucaaridno oo tusno inaan rabno isbeddel. Ma gaadhi kartid kacaan dhab ah adoo ka cabanaya waxkastoo qalad ah; taasna waxaad ku gaadhaa adiga oo sameeya.
Sidaa darteed, gacan ka gaysashada siidaynta kacaanka dhabta ah. Ku dhex gal naftaada dimuqraadiyada tooska ah lana wadaag websaydhkan iyo codsigiisa: www.fvvd.nl
Soodhawrka xiriiriya: bnr.nl, telegraaf.nl
Corona Qalalaasaha: Waxay qaadan kartaa 2 illaa 3 sano in laga baxo xannibidda ilaa lasocodsiinta hore iyo barnaamijyada
Tags: dhibaatada Corona, Fayruuska corona, featured, dhaqaale, joogsi kiro ah, dhimista kirada, dhibaatooyinka, Dowladda, kacaanka, taageero, xirmooyinka taageerada, tozo, iskaa u shaqeyste ah, jiirka
21 May 2020 ee 10: 25
Faafreebka ugu dambeeyay ee Facebook: wali waxaad leedahay dad raacsan, laakiin dib dambe uma dhejin kartid.
Waxay umuuqataa in boggayga Facebook uu dhamaaday: Wax dambe ma qori karo!
21 May 2020 ee 16: 48
Sida muuqata taasi waxay ahayd cilad farsamo ama waxay dib ugu celiyeen si kastaba ..
21 May 2020 ee 12: 02
Dhibaatadu waa inay ahaataa mid kor u qaadi doonta adeegyada dawladda / amniga.
Markay soo shaac baxdo nacaybkooda iyo talaabooyinkooda aan caqliga lahayn
Iyagu ma sugayaan. Dadka caadiga ah waa la oggol yahay
Ma garanayo xaqiiqooyinka mana aha in laga fikiro. Xuquuqda Aadanaha waa la jebiyey, laakiin yaa haddaba ah in dhammaan lagu cabsanaayo shaqada dowladda iyo / ama inta soo hartay walwal ka qabaan 'shaqadooda' ama noloshooda banal.
Nasiib wanaagse waxaan ku nool nahay waddan 'xor ah'.
Dadku hadda way saxeexeen codsiga!
21 May 2020 ee 12: 15
Waxa aan inta badan arkeynin ayaa ah in howshan lagu hagaajinayo isugeynta Nederland oo gobol ahaan loo maro EUSSR De facto, waxaa dusha u saaran kormeeraha siyaasada ee magaalada Brussels, kaliya daboolkan Corona wuxuu xaqiijinayaa in xabbadihii xumaa ee ugu dambeeyay ay dhacaan.
GDR wuxuu ahaa hargeysa. Tijaabi waxa ku duubnaan lahaa qaaradda Yurub. Waxaad hadda sidoo kale si cad u arki kartaa cidda maareysa marxaladdan kala-guurka, sida JFK tilmaamay, waa mashiin isku dara wax walba oo ka shaqeeya "Tallaabada Qufulka".
Stasi Merkel, Vestager xubin, Von der Leyen, iyo Timmerfrans indho indhayn iyo is oggol. Wejiga shaqaalaysiinta ee Stasi (Eurogendfor) ayaa bilaaban kara mustaqbalka dhow.
21 May 2020 ee 15: 26
Thanks Salmon! Wareysi aad u wanaagsan,
Madaxweynaha Faransiiska wuxuu lahaa xisaab hubin muhiim ah oo cad.
WAA LA QARAXAY (daqiiqad 6; 19 Waxay leedahay Gulag ma laha KGB “Weli”)
Daqiiqad 4; 03 Sida Gigscard d'Estain u ogaadey
21 May 2020 ee 19: 52
waad soo dhawaynaysaa kamarad! Waxay kaloo ahayd Macron inuu tartan geliyey Eurogendfor kana soo horjeeday dhaqdhaqaaqa "jaakadaha huruudda ah" ee tooska ah. Ka dib oo dhan, waa tijaabo-tijaabin ah ...
21 May 2020 ee 15: 53
mustaqbalka, diiradda iyo dabacsanaanta (fff = 666)
Tusaale ahaan, tillaabooyin muhiim ah ayaa laga qaatay iskaashiga ka dhexeeya EUROGENDFOR iyo hawlwadeennada CSDP ee rayidka ah, waxaana la sameeyay qorshe isgaarsiineed si kor loogu qaado muuqaalka EUROGENDFOR.
Sannadkan, fikradaha ugu muhiimsan ee mustaqbalka, diiradda iyo dabacsanaanta ayaa laga dheehan doonaa yoolalka aan nafteenna dejinno.
Mid ka mid ah yoolalkaas, iyo midka muhiimka ah, waa in la qeexo mustaqbalka EUROGENDFOR ee loo adeegsado aagag hawleed.
Tan macnaheedu waa inaan eegno iskaashiga gobolka iyo iskaashiga dhinacyada ka baxsan EUROGENDFOR, sida shuraakada shicibka iyo maamulada maxalliga ah.
Wada shaqaynta ayaa noo oggolaaneysa inaan wax ka baranno midba midka kale.
Sannadkan, Nederland waxay sidoo kale maareyneysaa Ururka Caalamiga ah ee Gendarmeries iyo Ciidamada Booliska oo leh Heerka Militariga (FIEP) iyo Barnaamijka Tababarka Shaqaalaha Rayidka ee Midowga Yurub (EUPCST).
Waxaan baari doonaa haddii aan abuuri karno xiriirro dhexmara ururradan oo aan qiimeyno sida midba midka kale loogu taageero sida ugu wanaagsan.
Arintaas awgeeda waxaa suuragal ah in xiriir lala yeesho FRONTEX sidoo kale waa la abuuri karaa.
Kooxahan takhasuska leh waa inay ahaadaan kuwo is bedbeddela oo diyaar u ah in dhaqso loogu geeyo xaaladaha qalalaasaha ku jira. Waa inay ku daraan awoodaha takhasuska leh ee loogu baahan yahay EUROGENDFOR hawlagal mustaqbalka mustaqbalka.
Qaabkan ayaan uga jawaab celin karnaa khataraha ka dhalan kara isbedelada iyo caqabadaha si hufan.
Waxaa jiri doona abid baahi intaa ka badan mustaqbalka.
Maanta, fikradaha muhiimka ah ee mustaqbalka, diiradda iyo dabacsanaanta (fff = 666) ayaa ka muhiimsan sidii hore.
22 May 2020 ee 12: 40
WARBIXIN: Baasaboorkii Talaalka ee Midowga Yurub “Laga bilaabo 2018
“Qorshaha Tallaalka” wuxuu soo bandhigayaa qorshe 3 sano ah oo lagu xoojinayo “kalsoonida tallaalka” iyo hormarinta “Raadinta elektarooniga ah”
21 May 2020 ee 12: 45
Sanadihii la soo dhaafay, badankood waxay ku seexdeen inay seexdaan oo la kariyo qunyar-socodkooda oo aan ku adkeysanahay inaan ka fikiro in xal wax ku ool ah laga heli doono waqtiga wax u socdey tobanaan sano ka hor indhahooda.
Waxaa ugufiican in diirada la saaro jiilka dhibaatada ugu badan ku dhufan doona jilitaankaan. Asal ahaan jiilka Z, ardayda leh deynta aan lahayn aragti.
21 May 2020 ee 13: 51
… Ilaa ay ka joogaan albaabkaaga hore:
De Jonge: 'karantiil ku khasbid siyaasad cusub oo imtixaan oo aan laga reebin'
Haddii isbadalladaas sharci-darrada ah aysan noqon kuwo aan micno lahayn, dowladdu waa mid sii saadaalinaysa:
21 May 2020 ee 14: 16
Palantir waxay la shaqeysaa qandaraasyo badan oo COVID-19, markan VA
Apple iyo Google waxay bilaabeen ogeysiinta soo-gaadhista API, taas oo u saamaxeysa masuuliyiinta caafimaadka dadweynaha inay sii daayaan barnaamijyada
22 May 2020 ee 00: 40
Waa kuwan 10-ka tillaabo ee ay tahay in aad shaqeyso, haddii aad rabto in aad fayras aan cabsi gelin u beddeleyso qabashada awoodda adduunka
1. Ku bilow fayras si liidata loo qeexay, ku dar imtixaan aan sax ahayn, oo ku dhiirigeli dadka ugu badan ee sida ugu dhimashada ama si daran u xanuunsan intii suurtagal ah in dib loogu celiyo tijaabada illaa laga helo cudurka.
2. Soo sheeg heerarkaaga dhimashada ee sida muuqata aan aad u sarreeynin oo ka warqabo inay dadkani u dhinteen fayraska ama si fudud ay ku jiraan.
3. Abuur 'jawaab' 'qalalaasaha' kaas oo soo rogaya shabakad ballaaran oo talaabooyin wax-ku-ool ah, oo qaarkood qorshahoodu socday muddo dheer, iyo in yar oo keliya oo leh codsi kasta oo suurtagal ah oo looga hortagayo aafada. (Hubi inaad baajiso doorashooyinka illaa ogeysiis dheeri ah iyo inaad si hagar la’aan ah u kordhiso awooda bilayska ee qabashada iyo la socoshada)
4. Isku xidhka cisbitaaladaada dhamaantood laakiin 'kiisaska wax wada oo' ah. Tirtir qalliinnada la doorto, baaritaanka kalyaha, daaweynta kansarka, latalinta GP-ga caadiga ah iyo dhammaan “daryeelka aan degdegga ahayn”. Markaa waa lama huraan in la kordhiyo dhimashada sababaha oo dhan.
5. U beddelo sharcigaaga qaabab badan oo u oggolaanaya in ku dhowaad dhammaan geeridaas cusub ay ka gudbaan baaritaannada iyo isku-dheellitirka iyo in si sahal ah loogu ogaado 'isku-xirnaan-19', ama iyada oo aan sax ahayn ama si fudud 'loo soo bandhigo kiliinikada'.
6. Haddii ay dhacdo in qaar kaqeybgalayaasha teeramka ah ay diidaan inay sidan raacaan, wax ka beddelaan sharciga si loogu oggolaado hal MD oo keliya, kaasoo laga yaabo inuusan waligiis arag bukaanka su'aasha ku jira, inuu ku baarto covid19 go'aankiisa / keeda.
7. Soo sheeg nambarrada naxdinta leh ee 'kiisaska cusub' ee aad ku aragtay iyada oo ay sabab u tahay khalkhalgelintaan kala duwan, sida caddaynta sida ay lagama maarmaanka u tahay tallaabooyinka cusub ee qoraa ee 'badbaadinta nolosha'.
8. Iyadoo aan lahayn wax caqli gal ah soo bandhigid qasab ah Ha Arin Dib U Soo Bixin (DNR) s taariikh kasta oo aad u aragto cuno aan faaido lahayn. (Haddii laga doodo kahadalka dhibaatada bina-aadamka, agabyada daryeelka caafimaad ee xaddidan iyo hawo-mareenka)
9. Ha ilaawin inaad ku darto wixii ku dhinta dhimashada wadarta guud ee wadarta.
10. Hubso inay warbaahintu ugu yeerato qof kasta oo su'aal ka weydiiya qayb kastoo ka mid ah 'the plotist theorist'.
23 May 2020 ee 10: 41
Madadaalo inaad ku xusto martien meiland maqaalkaaga. Waxaan inbadan la yaabanaa in magacaasi si miyir leh loo doortay / loo abuuray. Waxay leedahay cod la mid ah magacaaga. Miyey sii socon doontaa ilaa tan ayaa loo sameeyay si ula kac ah in si miyir la 'ah loogu daro magacaaga dadka dabeecadda uusan Martien Meiland u qaadanaynin si dhab ah?
Xitaa Crazier; Meiland waxay leedahay labo midab oo kala duwan oo indhaha ah, saameynta chimeric ee sawirka ...
23 May 2020 ee 16: 48
Afgambigii dhicisoobay ee dhaqaalaha ayaa sharxay, isla markaana u dhigma kuwa dumuqraadda:
« Mar dambe ma geli kartid dukaanka hadaadan magacaaga iyo nambarkaaga addoonka ah siin dukaanka taasina waa bilow
Maurice de Hond waxay heshay micnihiisu yahay hal iyo badh mitir qaanuun (fiidiyow) »
Wadarta booqashooyinka: 2.464.104